⭐ I-Evergreen Private Chalet + Igadi kunye ne-Treehouse ⭐
✅Indlu yonke ✅Ilungile kumaqela ✅Izilwanyana zasekhaya ezincinci ezinobubele
Baleka eBangkok ukuze uphumle okanye usebenze ukude kwindalo.
Kutheni uya kuyithanda:
⭐️Ubumfihlo: indlu yonke imigangatho emi-3 (ukuya kuthi ga kwi-24 ppl)
⭐️Imithi emikhulu: phumla kwindalo kwaye ubone ama-squirrels amhlophe
⭐️INetflix, iping pong, ibhodi yentenetya, iBBQ, ithala leencwadi, ukukhwela ibhayisekile, ichibi (imizuzu emi-2 ukuqhuba)
⭐️ Indlu yomthi: indawo ye-hammock + imbono yegadi enegadi
Yiba nexesha elisemgangathweni kwindalo kwaye ubukele ii-squirrels ezimhlophe zixhuma ukusuka komnye umthi ukuya komnye.
* Iindwendwe zidinga ezazo izithuthi ukuze zihambe.
Indlu enamabali ama-3 enegadi yabucala enomhlaba omkhulu kunye nendlu yomthi.
Eli khaya leholide lilungele umgangatho wexesha eliphantsi kunye nokuphumla okunzulu. Ukufumana imithi emikhulu enomthunzi kunye nendawo ezolileyo, indawo yimizuzu emi-5 ukusuka kwindlela enkulu. Indalo ejikelezileyo kunye ne-squirrels ezimhlophe ziyamangalisa.
Ngaphezulu kweendwendwe ezili-16 zihlawulisa: 700baht umntu/ngobusuku.
- Igumbi lokulala 1: iibhedi ezimbini ezinegumbi lokuhlambela
-Igumbi lokulala 2: iibhedi ezi-4 (igumbi lokuhlambela aliqhagamshelwanga)
Umgangatho wesithathu: indawo enkulu evulekileyo njengegumbi lokulala le-3
Iibhedi ezimbini (ezineekhethini)
-Ibhedi ephindwe kabini (eneekhethini)
- 10 oomatrasi ezikhoyo
- ngaphakathi kwindawo ezolileyo yokuphumla
-Imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kumbindi wedolophu yasePakchong
- ifanele abantu abafuna ukuphumla phantsi kwemithi emikhulu enomthunzi.
Imisebenzi: I-Pingpong, i-tennis knockboard, i-basketball hoop, i-BBQ, i-yoga, i-badminton, iibhayisekile zeentaba, ithala leencwadi, i-TV kunye ne-treehouse yexesha lokufunda.
Ungqongwe buhlaza oluchumileyo, uya kuvuka usiva iintaka zintyiloza kwaye uzive unamandla kumbono wegadi yabucala. Bukela oonomatse abamhlophe betsiba emthini baye kumthi.
Icala lendlu lihlathi elikhuselweyo elikwisiseko sikaKumkani, batyala iintlobo ngeentlobo zezilwanyana.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-8
4.65 ·Izimvo eziyi-38
4.65 · Izimvo eziyi-38
Indlu ingaphakathi kwindawo ezolileyo nekhuselekileyo. Indlu esekunene kwethu yeyeNtloko yamaPolisa kwaye ihlathi elingasemva yindawo yolondolozo lwendalo.
Indawo yokuphumla yimizuzu emi-5 ukusuka kwiziko lesixeko sasePakchong kunye nentengiso yasebusuku.
+ Ukungcamla iwayini eGranMonte (eChenin Blanc naseSyrah)
+ I-UNESCO Khaoyai National Park (ukuhamba intaba, ukuhambahamba, ukukhwela inqanawa, ukumisa inkampu, ukuhlola umqolomba wamalulwane)
+ Imizuzu eli-10 ukusuka kwimarike entsha yasePakchong
+ Imisebenzi yasemini: Iklabhu yaseThonsomboon yindawo yokuphumla yenkomo yenkomo kunye nepaki, ibonelela ngemisebenzi ekhuselekileyo neyonwabisayo yabantwana kunye nabantu abadala: ukukhwela ihashe, irodeo, ukudubula, iluge, iATV, hamba inqwelo, ukukhwela inqwelo, isikhephe esikhulu, umpu webb
+ Ilali yokuluka isilika ekufutshane
+ Ukulondolozwa kweendlovu
+ Iindawo zokutyela ezigqibeleleyo ezikufuphi: iPali (isitalato sokuthenga kwilali yase-Italiya ineevenkile ezininzi zekofu, i-ice creams parlor, iMori (imeko yaseJapan-enkulu ecaleni komlambo), ikhitshi lelizwe (iSteak kunye neThai)
+ Ifama yobisi yeChokchai
Umphathi wendlu yethu uNoy (0952642439) uya kukujonga kwaye akukhenkethe ekuqaleni. Uya kufumaneka ukukunceda ukuba kukho ingxaki. Sincoma ukuba ukhangele emini, imithi emikhulu ye-shady mihle kwaye mhlawumbi uya kubona ama-squirrels amhlophe!
Ungathumela umyalezo nge-app ka-Airbnb yaye ndiza kuphendula ngokukhawuleza kangangoko ndinako.
Umphathi wendlu yethu uNoy (0952642439) uya kukujonga kwaye akukhenkethe ekuqaleni. Uya kufumaneka ukukunceda ukuba kukho ingxaki. Sincoma ukuba ukhangele emini, imithi emikhulu ye…
Iilwimi: 中文 (简体), English, Français, Español, ภาษาไทย
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pak Chong